အခုနောက်ပိုင်း ဖုန်းတွေမှာ တွေ့တွေ့လာရတဲ့ UFS ဆိုတာဘာလဲ ? | Anycall Mobile
RKhar Min Thant,5months ago2min read 77
အကယ်၍ သင်က စမတ်ဖုန်းနယ်ပယ်နဲ့မစိမ်းတဲ့သူဆိုရင် အခုနောက်ပိုင်းထွက်လာတဲ့ Higher Mid Range ဖုန်းတွေ, Flagship ဖုန်းတွေမှာပါလာတဲ့ UFS 2.1 တို့ UFS 3.0 တို့ဆိုတာတွေကို မျက်စိဆံပင်မွှေး စူးနေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ အဲ့လိုပါပဲ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မြင်သာမြင်နေရတာ ဘာတွေမှန်းမသိလို့ပါ။ အခုတော့ ကျွန်တော်ရောသိချင်လို့ ရှာဖတ်ရင်း အားလုံးကိုပါ သိစေချင်လို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်။
ဒီ article ထဲမှာ UFS ဆိုတာဘာလဲ ? eMMC ဆိုတာဘာလဲ ? UFS ကတကယ်ပဲ ကျွန်တော်တို့အတွက် လိုအပ်လာတဲ့နည်းပညာတစ်ခုလား ? စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို နားလည်လွယ်အောင်ဖော်ပြထားပါတယ်။
အရင်ဆုံး UFS ကိုမပြောကြခင်မှာ ယခင်က Smartphone တွေရဲ့ Storage ပိုင်းဆိုင်ရာ တည်ဆောက်ပုံကို ပြောကြရအောင်ပါ။ ဒီနေရာမှာ Smartphone တစ်လုံးတည်ဆောက်ထားပုံကို အသေးစိတ်ဖော်ပြမှာမဟုတ်လို့ အကျဉ်းချုံးပဲပြောကြပါမယ်။ အရင်က ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေမှာ Storage ပိုင်းမှာ eMMC (embedded Multimedia Card) လို့ခေါ်တဲ့ Storage Chip တစ်မျိုးကို အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ဖုန်းတိုင်းမှာ စံသတ်မှတ်ချက်အနေနဲ့ အသုံးပြုကြတာဖြစ်လို့ တစ်သီးတစ်သန့်ဖော်ပြခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ သူ့ရဲ့ ပြိုင်ဘက်(Competitor) လို့ခေါ်လို့ရတဲ့ UFS ပေါ်လာခဲ့ပြီမို့လို့ UFS သုံးထားတဲ့ဖုန်းတွေက UFS 2.1, 3.0 စသဖြင့် ဖော်ပြလာကြတာပါ။ (ကျွန်တော်တို့ Branded အင်္ကျီတွေဝတ်ရင် Branded မှန်းသိအောင် တနည်းနည်းနဲ့ ဖော်ပြသလိုပါပဲ)
ကဲ ဒီလောက်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အရင်က eMMC ကိုဖုန်းတိုင်းမှာ storage standard အနေနဲ့သုံးခဲ့တယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ UFS ဆိုတဲ့နည်းပညာတစ်ခုထွက်လာလို့ UFS ကိုသုံးတဲ့ဖုန်းတွေမှာ UFS, UFS ဆိုပြီး မျက်စိနောက်အောင်မြင်တွေ့လာရတယ်ဆိုတာကိုသိသွားလောက်ပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒါဆို UFS ဆိုတာကိုထပ်ပြီးရှင်းပါမယ်။
UFS ဆိုတာ Universal Flash Storage ရဲ့ အတိုကောက်ပါ။ သူကလည်းပဲ eMMC လိုမျိုး Storage နည်းပညာတစ်ခုပါပဲ။ eMMC နဲ့မတူတာကဘာလဲဆိုတော့ သူ့ရဲ့ Write/Read Speed ဟာ eMMC ထက် မြန်ပါတယ်။ အဲ့လိုမြန်တယ်ဆိုတာကို သင့်အနေနဲ့ Facebook ကပုံတွေကို Save ရုံ၊ Google ကပုံတွေကို Download ဆွဲရုံနဲ့မြန်တယ်ဆိုတာကို ခံစားမိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်လိုအချိန်တွေမှာ ခံစားမိမလဲဆိုတော့ 4K Video တွေ 8K Video တွေရိုက်တဲ့အခါမှာတော့ သိသိသာသာခံစားမိလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့်လဲ UFS ကို နောက်ထွက်လာတဲ့ ဖုန်းတွေမှာအများဆုံးတွေ့လာရပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲ့ဖုန်းတွေမှာ 4K Video တို့ 8K Video တို့ Support ပေးလို့ပါပဲ။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း 4K, 8K Video တွေရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဖုန်းတွေမှာ UFS နည်းပညာကိုတွေ့ရပါမယ်။
UFS(Universal Flash Storage) ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်ပဲ လိုအပ်နေတဲ့ နည်းပညာတစ်ခုလား ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို အခုထိတော့ မဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောလို့ရပါသေးတယ်။ ဘယ်အချိန်တွေမှာလိုလာကြမှာလဲဆိုတော့ Next Generation ဖြစ်တဲ့ 5G တွေ 6G ခေတ်တွေမှာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်လာမယ့် နည်းပညာတစ်ခုလို့တော့တပ်အပ်ပြောလို့ရပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အရင် 2G, 3G ခေတ်တွေမှာ အခု 4G ခေတ်လိုမျိုး 1GB file ကို 10 mins လောက်နဲ့ဒေါင်းလို့ရတယ်ဆိုတာက အိပ်မက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သလိုပဲ နောက်လာမယ့် 5G, 6G ခေတ်တွေမှာလည်း ကျွန်တော်တို့အိပ်မက်လို့ထင်နေတဲ့ အမြန်နှုန်းနဲ့ Upload/Download လုပ်ရမှာဖြစ်လို့ပါပဲ။
UFS 3.0 (Photo-Internet)
အခုအချိန်မှာတော့ 5G ကိုအချို့နိုင်ငံတွေမှာ အသုံးပြုလို့ရနေပါပြီ။ တဆက်တည်းမှာပဲ တရုတ်မှာ 6G ကိုဆက်လက်သုတေသနပြုနေကြပြီလို့လဲဆိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်များမကြာမှီအချိန်အတွင်းမှာ ကျွန်တော်တို့က 5G ရဲ့ အသီးအပွင့်တွေကိုခံစားရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ 5G ရဲ့ လျှင်မြန်လှတဲ့ အမြန်နှုန်းနဲ့ လျှော်ညီစွာ Read/Write လုပ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ Universal Flash Storage လို့ခေါ်တဲ့ UFS နည်းပညာကို လိုအပ်လာမှာဖြစ်ပါကြောင်းပြောရင်းနဲ့ သင်ရဲ့ ဖုန်းမှာရော UFS Storage Technology ကိုအသုံးပြုထားလား UFS သုံးထားတဲ့ဖုန်းကို ကိုင်ရတဲ့အတွေ့အကြုံကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကို အောက်က ကွန်မန့်မှာ မျှဝေပေးသွားပါဦးဗျာ 🤗🤗🤩
Tags	#Knowledge	#UFS
Phishing ဘာလဲ ဘယ်လဲ ?
RKhar Min Thant,6months ago3min read
Pyae Sone Hein Htet,6months ago5min read
Nyein Aung Htet, 10 months ago4min read
RKhar Min Thant,4months ago3min read
Monday Versus; Joox လား? Spotify လား? နှစ်ခုလုံးလား?
Nyein Aung Htet, 10 months ago6min read